सरकारले निर्णय गर्‍यो तर खुलेनन् नाका- समाचार - कान्तिपुर समाचार
सरकारले निर्णय गर्‍यो तर खुलेनन् नाका
स्थानीय प्रशासन भन्छ– ‘लिखित निर्देशन आएपछि नाका पार गराउन अपनाउनुपर्ने मापदण्ड स्पष्ट हुन्छ । नाका खोल्ने विषयमा माथिल्लो निकायबाट कुनै निर्देशन छैन ।’
आश्विन ७, २०७८ माधव ढुंगाना, ठाकुरसिंह थारु, मनोज पौडेल, नवीन पौडेल
भैरहवा, बाँके, कपिलवस्तु, परासी — मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकले दक्षिणी सबै सीमा नाका खुला गर्ने निर्णय गरे पनि स्थानीय प्रशासनले यसबारे जानकारी नआएको बताएका छन् । जसका कारण सवारीसाधन लिएर नाका पार गर्न पुगेका नेपाली र भारतीय नागरिक सीमाबाटै फर्किनुपरेको छ । प्रशासकहरूले माथिल्लो निकायबाट निर्देशन नआएकाले नाकामा पुरानै नियम लागू भएको बताए ।
‘आवतजावतमा कस्तो प्रक्रिया अपनाउने भन्ने यकिन छैन,’ रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम तिवारीले भने, ‘लिखित निर्देशन आएपछि बल्ल नाका पार गराउन अपनाउनुपर्ने मापदण्ड स्पष्ट हुन्छ । नाका खोल्ने विषयमा माथिल्लो निकायबाट कुनै किसिमको निर्देशन आएको छैन ।’
बुधबार रूपन्देहीको बेलहिया नाका हुँदै गाडी लिएर दशगजामा पुगेकालाई फिर्ता पठाइएको थियो । भारततर्फबाट गाडी, मोटरसाइकल र रिक्सा नेपालतर्फ आइरहेकामा तिनलाई भारतीय सुरक्षाकर्मीले दशगजाबाटै फर्काइदिए । केहीलाई दशगजामा पार्किङ गराइएको थियो । नाकाबाट ओहोरदोहोर गर्नेको संख्या मंगलबार र बुधबार ह्वात्तै बढेको थियो । सर्वसाधारण पैदल ओहोरदोहोर गरिरहेका थिए । नाकामा तैनाथ सुरक्षाकर्मीहरू लाइनबाट सर्वसाधारणलाई भित्र्याइरहेका थिए । सुरक्षाकर्मीहरूले पनि नाका खुला गरिएको बारे कुनै जानकारी प्राप्त नभएको बताए ।
बाँकेमा पनि चल्तीका नाका खोल्ने सरकारी निर्णय कार्यान्वयनमा अन्योल देखिएको छ । जसका कारण नेपालगन्जको जमुनाहा नाका भएर बुधबार नेपाली सवारीसाधन भारत प्रवेश गर्न पाएनन् । सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा पेट्रोलियम पदार्थ बोक्ने नेपाली गाडीबाहेक सवारीसाधन भारत चल्न पाएनन् । भारतबाट भने मालवाहक ठूला सवारीसाधन नेपाल प्रवेश गर्न दिइएको छ । नेपालीलाई पैदल भारत आउजाउ गर्न दिइएको छ ।
नेपालगन्ज सीमासँग जोडिएको सीमावर्ती भारतीय बजार रुपैडिहामा साइकल, रिक्सा र मोटरसाइकलसमेत चल्न पाएका छैनन् । नेपालीहरू वारि नै सवारीसाधन राखेर भारत जाने गरेका कारण जमुनाह नाका पार्किङ स्थल बनेको छ । सडकमा सयौं रिक्सा र मोटरसाइकल पार्किङ गर्दा नाका अस्तव्यस्त देखिएको थियो । सीमास्थित इलाका प्रहरी कार्यालय जमुनाहका प्रमुख सई पूर्ण खत्रीले सीमानाका खोल्नेबारे कुनै जानकारी नआएको बताए । पहिलेजस्तै नाका भएर पैदल आउजाउ गर्न दिइएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थ बोकेका गाडीबाहेक अन्य सवारीसाधनलाई भारत प्रवेश गर्न दिइएको छैन । ‘सीमा पूर्ण रूपमा खोल्नेबारे कुनै निर्देशन हामीलाई छैन,’ उनले भने ।
बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराज गेलालले सरकारले नाका खोल्ने निर्णय गरे पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न भारतीय सरकारबाट निर्णय भएको बारे जानकारी नआएको बताए । भारतीय सहमतिबिना नेपाल सरकारले मात्रै नाका खोल्ने निर्णय गर्दैमा त्यो कार्यान्वयनमा आउन समस्या हुने उनको भनाइ छ । ‘नेपालले सीमा खोल्ने निर्णय गरेको ठीक हो । तर, भारतको केन्द्रीय सरकारले नाका खोल्नेबारे गरेको निर्णय बुझ्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘भारतले निर्णय नगर्दासम्म हामीले गाडी पठाउँदा भारतमा अवरोध हुन सक्छ ।’
कपिलवस्तुका दुई नाकामा पनि सरकारी निर्णयको प्रभाव परेन । बुधबार पहिलेकै जस्तो अवस्था देखियो । यहाँका दुई नाका कृष्णनगर र मर्यादपुरमा नाकाको छेउछाउबाट सर्वसाधारण आवतजावत गरिरहे पनि निजी र भाडाका सवारीसाधन रोकिएका छन् । उता, सीमासम्म भारतीय सवारीसाधनमा आउने र सीमाबाट हिँडेर पार गर्ने गरिएको छ । ‘जिल्लाबाट कुनै सूचना छैन,’ इलाका प्रहरी कार्यालय कृष्णनगरका निरीक्षक सुकदेव पौडेलले भने, ‘यहाँ पहिलेकै जस्तो अवस्था छ ।’ आफूहरूले पनि पत्रपत्रिका पढेर नाका खुला भएको बारे थाहा पाएको उनले बताए ।
कृष्णनगर नाका मुलुकको ठूलो भन्सार नाकामा पर्छ । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाका खोल्ने निर्णय गरे पनि पश्चिम नवलपरासीको महेशपुर नाका र छोटी भन्सारको नाका पूर्ण रूपमा खुला भएको छैन । नाका नखुलेको भए पनि सर्वसाधारणलाई हिँडडुलमा रोक लगाइएको छैन । सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल २६ नम्बर गणका एसपी महेश अधिकारीले नाका खुला गर्नेबारे औपचारिक पत्र नआएको बताए । जिल्ला प्रशासन र हेडक्वार्टरबाट औपचारिक पत्र आएपछि भारतीय पक्षसँग समन्वय गरेर नाका खोलिने उनले बताए ।
प्रशासनले औपचारिक रूपमा नाका नखोले पनि बुधबार लुम्बिनीका सीमा क्षेत्रमा भीडभाड देखिएको थियो । सामान्य किनमेलदेखि कामका लागि सर्वसाधारण ओहोरदोहोर गरिरहेका थिए । ‘नाका खुलेपछि बल्ल व्यवसायीलाई राहत पुग्ने आशा लागेको छ,’
पाल्हीनन्दन–१ ठुटीबारीका व्यवसायी नरेश पटेलले भने, ‘यसअघि नै स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेर नाका खोल्नुपर्नेमा ढिलै भए पनि खुल्यो ।’ भारतीय सीमावर्ती नाका ठुटीबारी बजारमा अधिकांश ग्राहक नेपाली हुने गर्छन् । यसअघि भारत ठुटीबारीका स्थानीय व्यवसायीले पटक–पटक नाका खुलाउन भारत र नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दै आएका थिए ।
कोरोना संक्रमण नियन्त्रण र रोकथामका लागि सरकारले २०७६ चैत पहिलो सातादेखि सबै सीमा नाका बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । पैदल आउजाउ खुलाए पनि सवारीसाधनसमेत खुलाउनेबारे सरकारले मंगलबार निर्णय गरेको थियो ।
प्रकाशित : आश्विन ७, २०७८ ०९:३८
बालबालिकामा उच्च ज्वरो र रुघाखोकी
आश्विन ७, २०७८ भवानी भट्ट
कञ्चनपुर — मंगलबार दिउँसो महेन्द्रनगरस्थित महाकाली प्रादेशिक अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा उच्च ज्वरोले च्यापेका एक बालकलाई ल्याइयो । महेन्द्रनगर बजार क्षेत्रकै ती बालकको ज्वरो मापन गर्दा १०४ दशमलव ९ डिग्री थियो । उच्च ज्वरोसँगै बान्ता गर्ने र झाडापखालाको समस्या थियो ।
आकस्मिक कक्षमै रहेका डा. गोविन्द रोकायाले ती बालकलाई तत्काल भर्ना गराए । चेकजाँच गर्दा निमोनियाको संकेत देखियो । पीसीआर परीक्षण गर्दा कोरोना नेगेटिभ आयो । पछिल्लो दुई सातायता महाकाली प्रादेशिक अस्पतालमा यस्तै लक्षणका बालबालिका बढी मात्रामा आउन थालेका छन् । यस्ता बिरामी ओपीडीभन्दा पनि आकस्मिक कक्षमा रातिको समयमा आउने गरेका हुन् ।
‘अहिले यस्तै लक्षण भएका बालबालिकाहरू आउने गरेका छन्,’ डा. रोकायाले भने, ‘भारतमा बालबालिकामा देखिएको नयाँ भेरिएन्ट पनि हुन सक्छ ।’ उनले अहिले कोभिडकै निमोनियाको उपचार पद्धति अपनाएर बालबालिकाहरूको उपचार भइरहेको बताए ।
केही दिनयता महाकाली प्रादेशिक अस्पतालमा उच्च ज्वरो, रुघाखोकी र निमोनियालगायत लक्षण भएका बालबालिका बढी आउन थालेका छन् । अस्पतालमा आउने बिरामीमध्ये ७० प्रतिशत बालबालिका रहेको अस्पतालले जनाएको छ । आकस्मिक कक्षमा दैनिक ५०/६० बिरामीहरू आउने गरेका छन् । त्यसमा पनि ३५/४० बालबालिका नै छन् । ‘बढीजसो बालबालिकाहरू रातिको समयमा भर्ना हुने गरेका छन्,’ डा. रोकायाले भने, ‘सुरुको अवस्थामा निजी मेडिकलमै उपचार गराउने र जब बालबालिकाहरू थला पर्न थाले त्यसपछि मात्रै अस्पताल ल्याउने गरेका कारण समस्या हुने गरेको छ ।’ महाकाली अस्पतालमा रहेका बालरोग विशेषज्ञ डा. रमेश जोशी अहिले तालिमका लागि बाहिर छन् । त्यसकारण यहाँ आउने बालबालिकालाई सीमावर्ती खटीमा वा धनगढी पठाउने गरिएको उनले बताए ।
विशेषज्ञ डाक्टर नहुँदा बालबालिकाहरूलाई सामान्य उपचारपछि अन्यत्र पठाउनुपरेको छ । ‘यतिबेला बिरामीको चाप बढी नै छ,’ महाकाली प्रादेशिक अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. हरिकुमार श्रेष्ठले भने, ‘बालबालिकामा उच्च ज्वरो र रुघाखोकीको समस्या बढी छ ।’ उनका अनुसार अस्पताल आउने अन्य बिरामीमा पनि यो समस्या भएको बढी मात्रामा छन् ।
‘अहिले बालबालिकामा भाइरलको संक्रमण धेरै छ, ग्रामीण भेगमा अझ बढी बिरामीहरू देखिन्छन्,’ जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय कञ्चनपुरका जनस्वास्थ्य निरीक्षक सिद्धराज भट्टले भने, ‘बालबालिका मात्रै होइन अन्यमा पनि भाइरलको प्रकोप छ ।’ उनका अनुसार मौसम परिवर्तनसँगै यही समयमै विद्यालयहरू प्नि खुलेका कारण यसको प्रभाव बढेको हुन सक्ने देखिन्छ ।
पछिल्लो समय बालबालिकाहरूमा पनि कोरोना संक्रमण देखिन थालेको छ । गत बिहीबार मात्रै महाकालीपारिको दोधारा–चाँदनी नगरपालिकामा १५ वर्षमुनिका ५ बालबालिकामा कोरोना संक्रमण पुिष्ट भएको छ । उनीहरूको अवस्था सामान्य रहेको दोधारा–चाँदनी स्वास्थ्य शाखा प्रमुख जयबहादुर महराले बताए । उनका अनुसार दुई साताअघि पनि २ बालबालिकामा संक्रमण देखिएको थियो । उनीहरू अहिले संक्रमणमुक्त भएका छन् । स्वास्थय कार्यालयका अनुसार साउन २२ यता कञ्चनपुरमा १५ वर्षमुनिका ३६ बालबालिकामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । कतिपय ५/७ वर्षका समेत रहेको जनस्वास्थ्य निरीक्षक भट्टले बताए ।
प्रकाशित : आश्विन ७, २०७८ ०९:३६